Madaxweyne Ahmed Siilaanyo waxa uu doonayaa in uu Somaliya la hadlo, laakiin ma doonayo in uu la midoobo. | Anti-Tribalism
← Nuur Cadde oo shirkad Talyaani ah u xilsaaray in ay xaraashto dhismaha safaaradda Soomaaliya & Soomaalida Talyaaniga oo arrinta ku baraarugay…
Fadeexad: $58 Milyan oo Dawlada Soomaaliya Soo Gashay Sanadkii 2011 oo Aan La Ogeyn Halka ay Martay →
Madaxweyne Ahmed Siilaanyo waxa uu doonayaa in uu Somaliya la hadlo, laakiin ma doonayo in uu la midoobo.
Moment Media Group – London – Madaxweynaha dalka Somaliland ayaa BBCda u sheegay in ay hore ula midoobeen Somaliya, laakiin ay immiga yihiin dal midnimadii ka soo noqday, oo aan doonayn in ay dib dambe ula midoobaan Somalia. Waxa kale oo uu sheegay in ay dawladda TFGda ee Sh. Sharif u wada hadli doonaan si siman, oo laba dawladood oo jaar ah.
Halkaa uu u sheegay BBCda oo aan qarsoodi ahayn, ayaa ahaa mid daba socday, waraysi uu Sh. Sharif shirkii kadib siiyey saxaafadda, kaasi oo uu Somaliland ku sheegay in ay ka mid tahay dawladda Federaalka ee uu isagu madaxweynaha ka yahay. Isaga oo dhinaca kalena ka taabanaya in ay diyaar u yihiin wixii ay Somaliland tirsanayso oo ay diyaar u yihiin in laga wada hadlo.
Bishii hore ayaa Somalida shir caalami ah loogu qabtay magaalada Ingiriiska, waxana ay ahayd markii ugu horreysey ee Somaliland ay illaa 1991kii ka soo qayb gasho shir Somaliyeed oo weliba uu Madaxweynahooduna uu joogo. Laakiin weli waxa ay ku adkaysanayaan in aanay diyaar u ahayn midnimo Somaliyeed.